Inethiwekhi Yokuxhumana – Android – Vessoft
AndroidIndlela yokuphilaInethiwekhi Yokuxhumana
Facebook – Ukusetshenziswa kwenethiwekhi yezenhlalo ethandwa kakhulu. Isoftware inika amandla okubuka nokwakha okuqukethwe okwehlukene okukhona kwinethiwekhi yezenhlalo.
Ithuluzi microblog futhi umyalezo exchange inethiwekhi ethandwayo emphakathini. Isofthiwe ikuvumela ukubuka futhi ukuphawula amanothi.
I-Linkedin – inethiwekhi yokuxhumana nabantu igxile kusihloko sokusungulwa koxhumana nabo bebhizinisi. Isoftware inika amandla ukubuyekeza izinkampani ezahlukahlukene zomhlaba kanye nabamele bazo.
I-Google + – isoftware yokuxhumana nokuphatha inethiwekhi yezokuxhumana kusuka enkampanini edumile. Isoftware ihlanganisa zonke izinsiza zakwa-Google futhi ungasebenzisa ukuvumelanisa kwazo ne-akhawunti yomsebenzisi.
I-Instagram – isoftware yokuhlala kwenye yamanethiwekhi omphakathi avakashelwa kakhulu emhlabeni. Uhlelo lokusebenza liqukethe imiphumela eminingi yokuhlunga kanye nezihlungi zomsebenzi osebenzayo ngezithombe.
I-Facebook Lite – inguqulo engasindi yeklayenti lokuxhumana labantu elidumile elisebenzisa izinsiza zohlelo ezimbalwa futhi lisebenza ngokuqinile kumanethiwekhi ngokuxhumana okubuthakathaka.
Isofthiwe ukuphatha ingosi yokuxhumana okuyinto kuthambekele emsebenzini amaqoqo izithombe ezahlukene nezithombe. Isofthiwe eziningi izilungiselelo for the control elula a yosebenzisayo.
Ask.fm – isoftware ukuphatha insizakalo ethandwayo yemibuzo nezimpendulo. Isoftware ixhumana namanye amanethiwekhi omphakathi athandwayo.
Isofthiwe ukudala futhi ukubuka ividiyo iDemo amanethiwekhi omphakathi. Isofthiwe kwenza ukuba ukubhalisela ividiyo iziteshi ezahlukene, ukubuka okuphakelayo izindaba ashiye imibono kumavidiyo.
The popular Ingosi yokuxhumana nabantu yenza ukuxhumana emhlabeni wonke futhi kusekela imidlalo ekhethekile ezikhuthaza abantu obajwayele abasebenzisi.
I-9GAG – ithuluzi elilungele ukubuka okuqukethwe okuvela kwensiza yokuzijabulisa eyaziwayo 9GAG. Isoftware inika amandla wokwabelana ngokuqukethwe okujabulisayo nabangane, ukukala bese ushiya imibono.